Karoi idhorobha riri mudunhu reMashonaland West, muZimbabwe. Zita renzvimbo iyi rakavapo mushure mekuge maitika nyaya dzakasiyana siyana.Nzvimbo iyi yakava nemukurumbira wemadzimai ayishanda husiku vangadedzwa muchivanhu chedu sevaroyi. Mushure mekunge vabatikidzwa kwayedza nguva dzakati wandeyi vagari venzvimbo iyi pamwe nevavakidzani vakaona zvakakodzera kuti nzvimbo iyi ipiwe zita rinoenderana nemabasa evagari vemo
Karoi inowanikwa makiromita makumi masere nemashanu (53 maera) kubva muguta reChinhoyi iri guta guru riri pedyo, uye makiromita mazana maviri kuchamhembe nechekumadokero kubva muHarare. Dorobha reKaroi riri mumugwagwa mukuru weA1 pakati peHarare neChirundu, pamuganhu weZimbabwe neZambia, iri makiromita 170 kuchamhembe nechekumadokero kubva muKaroi. Mitsetse yakatarwa yakati sambamba yeKaroi inoti: 16° 48' 36.00"S, 29° 42' 0.00"E (Mbariro yeTaranyika:16.8100; Mutandariko weTaranyika:29.7000).
Mudhorobha reKaroi munowanikwa muzinda weKaroi District Administration. Rakakomberedzwa nemapurazi anorimwa fodya inobadara zvikuru.
Zita reKaroi rinoreva kuti "kamuroi kadiki". Mugore 1945 Karoi yakava nzvimbo yakapiwa kunyanya varungu vari varwi vehondo yepasi rose yechipiri vakawana rubatsiro kubva kuhurumende kuti vatange zvekurima fodya.
Mugore ra1992 kwakava nekuverengwa vanhu mudhorobha reKaroi kufungizirwa kuti huwandu hwaisvika pa14,763. Mugore ra2004, kwakafungizirwa kuti huwandu hwaisvika pa25,030.
Karoi ine masabhabha anonzi Chikangwe iri pachinhambwe chema makiromita maviri (1.2 maera), nechekumabvazuva nechepakati panoitirwa zvimabizimisi (CBD).
Vatauri veChewa vanoti chikanga (a thicket). Kune musha unonzi Chikanga kuKaroi.
↑ Road Distance Between Chinhoyi And Karoi With Map
↑ Map Showing Karoi And Harare With Distance Marker
↑ Road Distance Between Karoi And Chirundu With Map
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Karoi&oldid=62691"
Last edited on 8 Ndira 2019, at 16:44
This page was last edited on 8 Ndira 2019, at 16:44.